तरकारीवालीले तान्लिन् दर्शक ? « Ramailo छ
तरकारीवालीले तान्लिन् दर्शक ?
तरकारी बोकेको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि एकाएक चर्चामा आएकी युवती हुन्, कुशुम श्रेष्ठ । एक समय कुशुम तरकारिवालीको नामले मिडियामा खुबै छाइन् । भाइरल भएकी यिनै तरकारीवाली फिल्ममा समेत देखा परेकी छिन् ।
तरकारीवाली उर्फ कुशुम श्रेष्ठको छोटो रोल रहेको फिल्म ‘लम्फू’ यही शुक्रबार, बैशाख २८ गते रिलिज हुँदैछ । फिल्म रिलिजको बेला तरकारीवाली भने जाँच दिइरहेकी छिन् । यसकारण उनी फिल्मको प्रचार प्रसारमा सहभागी हुन पाइरहेकी छिन् ।
‘लम्फू’ छायाँकन सुरु भएदेखि नै तरकारीवालीको नाममा चर्चा भैरहेको छ । तरकारीवालीको नाममा कति दर्शक हलमा आउलान् त ? शुक्रबार सम्म प्रतिक्षा गरौं । तर फिल्ममा उनको भूमिका लामो नरहेको निर्माण टिमले स्पष्ट पारिसकेको छ ।
गोपालचन्द्र लामिछानेको निर्देशन रहेको ‘लम्फू’ मा मरिस्का पोखरेल, कविर खड्का र सलोन बस्नेतको मुख्य भूमिका रहेको छ । फिल्मलाई शक्तिबल्लभ घोरासैनीले निर्माण गरेका हुन् ।